त्यहाँ सामान्य प्रयोगकर्तालाई अबोध्य हुन् भनेर धेरै सर्तहरू छन्, त्यसैले उनीहरूसँग प्रत्येक सामना गर्न लायक छ। तपाईं वाइफाइ प्रत्यक्ष छ के को प्रश्न मा रुचि हुन सक्छ। यो प्रविधि यसलाई अलग वाइफाइ-उपकरणहरू एक जोडी बीच जडान स्थापना सरल बनाउन अभिप्रेरित थियो, लामो समय घोषणा गरेको थियो। एक अर्थमा, यो ब्लुटुथ आधारित वाइफाइ। को सादगी र सुरक्षा सेटिङहरू - पहिलो देखि यो थप गति र दूरी, र दोस्रो हो। र जस्तै सबै ठीक छ, तर साँच्चै यो सामना गर्नुपर्छ।
वाइफाइ प्रत्यक्ष, तपाईं पछिल्लो मा हेर्न आवश्यक कुरा बुझ्न। वायरलेस उपभोक्ताहरु उपकरणहरू एकदम सरल छ ब्लुटुथ, सीधा प्रयोग, विभिन्न छोटो-दायरा, कम लागत र धेरै व्यावहारिक ऊर्जा आवश्यकता। जब प्रदर्शन स्मार्टफोन लगभग कम्प्युटर संग समात्नु एक समयमा, म थप कुरा गर्न चाहन्छु। र यहाँ त्यहाँ छिटो छ, थप दूरी छ जो वाइफाइ छ, कि टिप्पण लायक छ, तर त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण caveat छ।
प्रारम्भिक योजना वाइफाइ दुई मोड मा संचालित गर्न सकिन्छ भनेर यस्तो थियो: प्रत्यक्ष, धेरै उपकरणहरू एक सरल आयोजना गर्दा नेटवर्क साथीहरूको गर्न साथीहरूको, र पूर्वाधार यातायात arbiter एक प्रकारको छ पहुँच बिन्दु, प्रयोग पनि समावेश छ। विकसित समय दोस्रो विकल्प र अगाडि सार्न, तर पहिलो बस नब्बे को दशक मा फँस: छ कम गति सञ्चालन र असुरक्षा द्वारा विशेषता, अब यो सबै उपभोक्ता उपकरणहरू द्वारा समर्थित छैन। त्यो त वर्तमान वाइफाइ बस पहुँच बिन्दु बिना गर्न सक्नुहुन्न यो, खतरनाक असहज र पूर्ण inapplicable छ, छ।
र कुरा कसरी हो?
उपभोक्ता वाइफाइ को निर्माता त जीवन आधुनिक प्रयोगकर्ताहरूको लागि सजिलो घरेलू पहुँच अंक लगभग हाल कुनै सेटिङहरू, र तिनीहरूलाई थुप्रै पूर्वनिर्धारित मा बक्स बाहिर सीधा काम गर्न चाहन्छु। धेरै प्रयोगकर्ताहरू बस कसरी वाइफाइ अन गर्न थाहा छैन। यो कारक धेरै राम्रो इन्टरनेट प्रदायक मुक्त वाइफाइ को एक विशाल संख्या अनुमति दिएको छ। यस वाइफाइ यस्तो बलियो पदोन्नति कारण थियो, तर यो यस्तो जडानहरू को असुरक्षा बारेमा धेरै मिथक गर्न वृद्धि दिनुभयो। माथिको सबै एक सरल र सुरक्षित वायरलेस नेटवर्क को पक्षमा प्राथमिकता को परिवर्तन विक्रेताहरु भन्ने तथ्यलाई गर्न नेतृत्व गरेको छ। यो यहाँ छ, र प्रश्न वाइफाइ प्रत्यक्ष छ के, उठ्छ।
यो जडान विधि धेरै लाभ छ:
- उपकरणहरू बीच सुरक्षित प्रत्यक्ष ब्लुटुथका त्यसै गरी स्थापित भएको छ, तपाईंले, उपयुक्त तत्व को सूचीबाट चयन PSK र SSID बारेमा सोच बिना बस गर्न आवश्यक;
- एक पारंपरिक ब्लुटुथ भन्दा धेरै छिटो यी सञ्जालहरू को गति;
- हुन उपकरणहरू बीच एकदम ठूलो दूरी;
- विश्वसनीयता को उच्च डिग्री र सुरक्षा स्थायी चलिरहेको WPA2, जो असक्षम हुन सक्दैन प्रत्याभूति गरिएको छ।
त्यसैले, के वाइफाइ प्रत्यक्ष छ, यो स्पष्ट छ, यो आवश्यक यस्तो पहुँच को intricacies सँग सम्बन्धित मुद्दाहरू सामना गर्न छ। को 802.11 मानक एक नयाँ संशोधन को ग्रहण धेरै वर्ष लाग्नेछ। यो क्षणमा उपलब्ध विनिर्देशों र स्तर भित्र सुई मुद्दा निर्णय भएको थियो।
प्रत्येक वाइफाइ उपकरण वास्तवमा सफ्टवेयर पहुँच बिन्दु उपकरण क्षमताहरु रूपमा साथै नै ठोकुवा गर्न सक्षम, छ, र WPS समर्थन गर्दछ। तपाईं यस्तो मार्ग वा स्विच ट्राफिक केही थप कार्य, महसुस गर्न अघि ग्याजेट कस्तो आधारमा।
वाइफाइ प्रत्यक्ष लागि समर्थन छ जो यन्त्र, गर्न SoftAP को कार्यान्वयन मार्फत, तपाईं WPA2 सँग काम गर्न मौका भएको एक पारंपरिक इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरू जडान गर्न सक्नुहुन्छ। उन्नत मोड्युलहरूसँग यन्त्र साथ टेथरिंग प्रदान गर्दछ जो वाइ-डि, र वाइफाइ, जडान गर्न सकिन्छ।
यी सबै घटनाक्रमहरूले को परिणाम आफ्नो क्यामेरा बाट मुद्रक र मुद्रण फोटो सीधै जडान गर्न प्रयोगकर्ताको क्षमता छ, वा तपाईं बस एक डिजिटल तस्वीर फ्रेम तिनीहरूलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। अतिथिहरूको तपाईंको टिभी भिडियो सिधै प्रसारण गर्न अवसर पाउनेछन्, यो त एउटा लैन जडान मा समय बर्बाद गर्न, र आवश्यकता छैन। यो सबै चाँडै र सजिलै हुन जाँदै छन्। पहिले नै chipsets सैमसंग वाइफाइ प्रत्यक्ष, साथै उत्पादन अन्य निर्माताहरु छन्।
त्यसैले, यदि हामी एक वाइफाइ प्रत्यक्ष, त्यसपछि यो एक पारंपरिक वाइफाइ-मोड्युल को हार्डवेयर मा धेरै फरक छ के कुरा। यो नयाँ समाधान को प्राविधिक विशेषताहरु व्यावहारिक आधुनिक वायरलेस नेटवर्क संग समान हुन् भनेर बाहिर जान्छ। नयाँ ग्याजेटहरू विद्यमान वाइफाइ-उपकरणहरू उपयुक्त छन्। नयाँ चिप्स को सबै भन्दा 2.4 GHz एक आवृत्ति मा काम शामिल छ, त्यसैले तिनीहरू 802.11 मानक को पहिले संस्करण अन्तरक्रिया गर्न कुनै समस्या छ, र केही अवस्थामा 802.11n काम हुनेछ। को मोड्युलहरू तिनीहरूलाई नयाँ नेटवर्क जडान गर्न अनुमति दिन्छ जो पाँच megahertz एक आवृत्ति, मा सञ्चालन हुनेछ। प्रस्तावित जानकारी अनुसार चिप को एक ठूलो भाग दुवै आवृत्तियों समर्थन सक्षम छ बुझे गर्न सकिन्छ।
वाइफाइ प्रत्यक्ष - यो सधैं एक मिश्रित "एक एक" छ
मानक प्रत्येक अन्य दुई उपकरणहरू जडान गर्न अभिप्रेरित छ भन्ने तथ्यलाई, सधैं अवसर यो सीमित गरिने होइन। यो सम्भव वाइफाइ प्रत्यक्ष Windows मा चलिरहेको7एक यस्तो कन्फिगरेसन लागि प्रयोग गरिएको छ, उदाहरणका लागि समूहमा यन्त्रहरू बीच एक जडान सिर्जना गर्न, छ बहु गेमिङ। यस मामला मा, खेलाडी इन्टरनेट पहुँच वा केही मोबाइल वा अन्य कोटिंग आवश्यक छैन। उपकरण प्रत्येक अन्य को दायरा भित्र राखिएको छ भने मरुभूमि अवस्थामा पनि तिनीहरू एउटा सानो वायरलेस नेटवर्क फारम गर्न सक्छन्। छैन नै समय मा नेटवर्क को सबै सदस्यहरु यस मानक कायम हुनुपर्छ। एक एकल चिप वाइफाइ प्रत्यक्ष, यातायात समन्वय वाइफाइ-मोड्युलहरूसँग यन्त्रहरू बीच रोलिङ को कार्य मा लिन सक्षम छ।
यो कहिलेकाहीं समूह सिर्जना केही ग्याजेटहरू मूल "एक एक मा" जडान गर्न मात्र डिजाइन किनभने, सम्भव छैन भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। मानक को विनिर्देशों धेरै प्रयोगकर्ता जडान गर्ने क्षमता वैकल्पिक छ देखि, एक अन्तर्विरोध छैन। प्रत्येक उपकरणको लागि यस प्यारामिटर बारेमा भने जो एक विवरण छ।
सिम कार्ड कसरी लक गर्ने? केही सुझावहरू
कसरी विच्छेद गर्न सेवा "मेघाफोन" र गलत हुँदैन?
"मेघाफोन" "विश्व भरिको": विकल्प र महसुल असक्षम
बाल लागि थर्मल सुरक्षा
रोमन एफएम Dostoyevsky गरेको "राक्षस": सारांश
Hamsters लागि नाम
शैम्पू "Neva प्रसाधन", "टार": ग्राहक समीक्षा
हस्यास्पद भूल बाँदर: को प्राइमेट्स को विवरण र आफ्नो पुकारा महत्त्व
इथाइल अल्कोहल संग विषाक्तता: लक्षण, पहिलो सहायता, उपचार, नतिजा